Home Wararka Qoor Qoor, Lafta Gareen & Guudlaawe amnigooda ma ku aamini karaan Rooble?
Qoor Qoor, Lafta Gareen & Guudlaawe amnigooda ma ku aamini karaan Rooble?
Qodobka ugu weyn ee la isaga soo horjeedo shirka Wadatashiga Qaran ayaa ah in sida laga yeelayo amniga dalka iyo kan doorashada. RW Rooble ayaa codsanaya in Amniga dalk isaga lagu wareejiyo.
Iyada oo dastuurka dalka qeexayo in amniga dalka uu hoos imanayo madaxweynaha xiligaas talada haya, hadii uu dhinto ama la ceyriyana uu hogaanka amniga dalka uu la wareegayo Gudoomiyaha Baarlamaanka inta madaxweyne laga soo dooranyo ayaa ay adag tahay in si toos ah aminga dalka loogu wareejiyo RW Rooble.
Dhanka kale, xukuumada Rooble ayaa qaaday talaabooyin walwal iyo cabsi galiyay madaxda dowlad goboleedyada, waxaana ka mida:
1) Ku goodiga ay ku goodiyeen inay xabsiga ka sii deynayaan Mukhtaar Roobow si khal-khal siyaasadeed loo galiyo hogaanka Lafta Gareen. 2) Kala dirida ciidanka NISA iyo magacaabista hogaan ka amar qaata Rooble 3) Cabsi galinta saraakiisha ciidanka ee horay qaybta uga ahaa ciidanka Badbaadi Qaran, kuwaas oo qaarkood lagu handaday in la soo xirayo 4) Olole uu wado Rooble oo lagu ceyrinayo Qoor Qoor, isaga oo rumeysay in uu jiro qorsha la doonayo in Qoor Qoor lagu badalo Wasiir Al Cadaala.
Madaxda sadaxdaas dowlad goboleed ayaa rumeysan in dagaalka ku socda Farmaajo oo uu wado RW Rooble uu ugu danbeyntii ku soo dhamaan doono in iyaga la cinqilaabo, kooxda uu wato RW Rooble iyaga lagu badalo.
Previous articleShirka GWQ oo maalintii 4aad galaya & una muuqda inuu fashil ku soo dhamaanayo
Next articleGuled Salax oo ku eedeeyay MW Deni cuuryaaminta dimoqoraadiyada Puntland